प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा नेपाली दर्शनका विविध पक्षमाथि गरम बहस | Indrenionline.com
कार्यक्रममा चारवटा विभिन्न दर्शनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । दर्शनका ज्ञाता विष्णु प्रभातले ‘प्र्रकृतिपूजक बोन दर्शन : संक्षिप्त परिचय’ शीर्षकको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने डा. भक्त राईले ‘किरात राई मुन्दुमको तत्व मीमांसा’, डा. चन्द्रकुमार सेर्माले ‘किरात धर्म, मुन्धुम दर्शन’, र किरण राईले ‘प्रेमवाद दर्शनको परिचय’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा. भक्त राईले गोष्ठीले मूलधारमा नपरेका दर्शनलाई पनि छलफल र बहसमा ल्याउन जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।